Boeny: zaza miisa 35 900 no hatao vaksiny Polio | Région Boeny
35 900 no isan’ireo zaza tratrarina ho atao vaksiny miaro amin’ny lefa-kozatra eto amin’ny faritra Boeny ao anatin’ny dimy andro, mandritra ny hetsika fiarovana amin’ny lefa-kozatra.
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny 14 martsa 2016 tao amin’ny CSB Mahabibo Mahajanga ny hetsika faha fito fanamafisana ny andron’ny vaksiny Polio ho an’ny faritra Boeny, izay karakarain’ny Ministeran’ny Fahasalamam-Bahoaka.
Loha-hevitry ny hetsika ny hoe Zon’ny zaza ny ho salama, ataovy vaksiny ny zaza. Manana andraikitra amin’ny fiarovana ny fahasalaman’ny zaza ny ray aman-dreny hoy ny Lehiben’ny faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar nanokatra ny lanonana. Ny fanatanterahana ireo karazam-baksiny hoy izy dia efa porofo maneho izany fiarovana ny fahasalaman’ny zaza izany.
Zaza vao teraka hatramin’ny 59 volana miisa 35 900 no tratrarina homena vaksiny atete am-bava eto amin’ny faritra Boeny, hiarovana azy ireo amin’ny aretina lefa-kozatra.
Ekipa miisa 125 kosa, avy ao amin’ny Ministeran’ny Fahasalamam-Bahoaka izay miambozona karatra famantarana, miaraka amin’ny filohan’ny fokontany sy ireo mpiara-miasa aminy, no hidina ifotony hitety tokatrano hanao ny fanomezam-baksiny. Ny fokontany Manga no nanombohana izany teto Mahajanga.
Ho fanatsarana ny fanatanterahana ity hetsika fanaovam-baksiny miaro amin’ny lefa-kozatra ity, dia nanolotra Moto marika Honda miisa dimy ny Fandaharan’asa fanohanana ireo sampandraharaha sosialy ifotony misahana ny fahasalamana eto Mahajanga na ny PASSOBA-Santé (Programme d’Appui aux Services Sociaux de Base–Santé). Ka ny telo ho an’ny CSB Amborovy, CSB Antanimasaja, ary ny CSB Sotema. Ny roa ho an’ny CSB Mahabibo.
Ny volana avrily 2016 indray ny andiany faha-valo hoy ny Talem-paritry ny Fahasalamam-bahoaka eto Boeny, Rtoa Ratsiambakaina Diana. Nanotrona azy tamin’izao hetsika izao koa ny Lefitra voalohan’ny Ben’ny tanàna eto Mahajanga ary ireo mpiasan’ny Fahasalamana eto an-toerana.